Cabsi horleh oo ku aadan Eden Hazard oo soo wajahday Chelsea…(Maxaa soo kordhay?) – Gool FM
Cabsi horleh oo ku aadan Eden Hazard oo soo wajahday Chelsea…(Maxaa soo kordhay?)
(London) 02 Jan 2019. Chelsea aya la warinayaa inuu soo wajahay cabsi hor leh oo ku aadan xiddigeeda Chelsea ee Eden Hazard.
Blues ayaa ka casbi qabta in Hazard uu doonayo inuu ku biiro Real Madrid iyadoo ay kooxda reer London ka warqabto inay jirto fursad wayn uu kooxda kaga tagi karo xiddiga reer Belgium.
Chelsea weli kama dhaa-dhacsana in 27-jirka uu doonayo inuu nagi ku sii ahaado gegada Stamford Bridge, sida uu warinayo warsidaha bleacherreport.
Tababare Maurizio Sarri ayaa ka shaqeeyay inuu iska celiyo xiisihii Real Madrid uga imaanayay Hazard ka hor inta uusan xilli ciyaareedku bilaaban, laakiin kooxda reer Spain ayaa weli baadi goob ugu jirta sidii ay u heli lahayd badelka Cristiano Ronaldo.
Waxay u muuqataa in Hazard uu u dhaqaaqi karo Los Blancos suuqa xagaaga, maadaama ay Real Madrid ay eeganeyso inay sare u qaado lacagaheeda 150-milyan oo bound si ay ugu dhawaato 200-milyan oo bound ay Blues dul dhigtay madaxa Weeraryahankooda.
Hazard ayaa xilli ciyaareed fiican qaadanay kal ciyaareedkan isagoona durba dhaliyay 10-gool Premier League 19-kulan uu ciyaaray.
Yeelkeede, qandaraaska uu Stamford Bridge ku joogo ayaa dhici doona 2020 hakad ayuuna galiyay inuu mid cusub saxiixo.
Haddii wax heshiis ah la gaari waayo, waxay Chelsea ku qasbanaan doontaa inay dirto laacibka halkii ay khatar ugu gali lahayd inay bilaash ku wayso.
DEG DEG: Chelsea oo dhammeystirtay Saxiixii ugu horreeyay Janaayo....(Laacib la isku heystay oo ay Gacanta ku soo dhigtay)